Ụlọ ọrụ na-enye anụ ụlọ |Ndị na-emepụta anụ ụlọ nke China na-eweta, ndị na-ebubata ya
Anụ anụ anaghị enye mkpịsị aka Silicone Mitts na-asa nwamba nkịta na-edozi ntutu isi na-ewepụ ahịhịa anụ anụ uwe mkpuchi.
Mgbochi mgbochi skid:Ọkpụkpụ dị n'ime ahụ adịghị amị amị, na ogologo nkịta na-asa ahụ ncha ntutu na-ejikọta ya na ngbanwe dị mma, nke nwere ike ime ka uwe aka ahụ dabara na aka ma ghara ịdị mfe ịdapụ.Ọ dịghị mkpa ịgbanwe uwe aka ugboro ugboro n'oge ịsa ahụ.
Ojiji otutu:Kwesịrị ekwesị maka ụdị anụ ụlọ nwere aji, dị ka nwamba, nkịta na oke bekee.Na mgbakwunye na anụ ụlọ, a nwekwara ike iji uwe mkpuchi ịsa ahụ na-ehicha ihe ndị dị na tebụl, ngwá ụlọ, ụgbọ ala, uwe na ihe ndị ọzọ.
Ihe Nrụpụta Ọhụrụ Anti Barking Device Silicone Rubber Pet Bite Suit mgbochi ogbugbo na-edozi nkpuchi ọnụ nkịta
Eriri na-agbanwe, dị nro, dị mma ma nwee ike ịhazi ya n'efu.Na-eyi nke a, anụ ụlọ gị ga-enwe ahụ iru ala.Mgbe nkịta gị na-apụ na-eyi ngwaahịa a, ọ nwere ike gbanwee isi ya nke ọma na-enweghị nrụgide ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ n'oge usoro ịzụrụ ihe, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na email.Afọ ojuju gị bụ ọrụ kacha anyị mkpa.
Ngwa nlekọta anụ ụlọ nke enwere ike ijikwa ntutu anụ ụlọ ịsa ahụ ahịhịa nkịta comb ahịhịa bath pet
Ịhịa anụ ụlọ gị: Anụ ụlọ ga-amalite izuike n'okpuru mmegharị ahịhịa.Jiri ahịhịa ịsa ahụ anụ ụlọ a na-asa ahụ nke ọma bụ isi ihe na-eme ka anụ ahụ dị ike nke anụ ụlọ gị. Mmetụta abụọ nke ịhịa aka n'ahụ na-akpali akpali nke na-eme ka akpụkpọ ahụ dị mma na uwe mkpuchi.
BRUSH BATH kacha mma: Ezubere maka ogologo ntutu dị mkpụmkpụ na nke dị mkpụmkpụ, mmetụta abụọ nke ihicha & ịhịa aka n'ahụ na-eme ka ahụmịhe ịsa ahụ maka nkịta anyị na-atụ anya ugboro ugboro.